U Aung Htoo | Myanmar Muslims' Voice (MMV)
Tag Archives: U Aung Htoo
June 12, 2016 Featured Posts, ဆောင်းပါးနှင့်အာဘော်, ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံရေးသတင်း
ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုင်ဂျာယန်မြို့ တွင် တည်ရှိသည့် ဖက်ဒရယ်ဥပဒေ အကယ်ဒမီတွင် ဥပဒေ အလုပ်သင် (Law Internship) အနေဖြင့် ဖွင့်လှစ်ပို့ ချရသည့် ရည်မှန်းချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ (၁) ဖက်ဒရယ်ရေးရာ လှုပ်ရှားမှုအား ဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံမှ ထိရောက်စွာ ပံ့ပိုးပေးလျှက် စစ်မှန်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများ ပေါ်ထွန်းလာရေး၊ ဒီမိုကရက်တစ် ဖက်ဒရယ် ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ပြည်နယ် ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများ ပေါ်ထွန်းလာစေရေးတို့အတွက် ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်သွားရန်။ . (၂) “ဗဟိုပြည်ထောင်စုသို့ လွှဲအပ်သော အာဏာများမှလွဲ၍ ပြည်ထောင်စုဖွဲ့ စည်းရာတွင် ပါဝင်သည့် ပြည်နယ်များသည်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဖြစ်သည်။” (Member states of the
. ပထမတခုမှာ နောက်ခံ ဥပဒေအဆောက်အအုံ (Background Legal Framework) ဖြစ်သည်။ အမျိုးသား ညီလာခံကျင်းပနေစဉ်က စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို အသက်သွင်းထားသည့် ဖွဲ့ စည်းပုံတည်ရှိမနေ။ ယခု ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံ တည်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကို အရိပ်မဲကြီးထိုးနေမည်မှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါ။ . ဒုတိယတခုမှာ ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်အချိုးအစား(Proportion of Representation) ဖြစ်သည်။အမျိုးသား ညီလာခံတုံးကပင် ကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့ အနေဖြင့် အမည်နာမ အတိအကျတပ်ကာ တက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့သော တပ်မတော်သားများအား ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံတွင်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ ၁၅၀ အထိသတ်မှတ်ပေးလိုက်သည်။ ၄င်းတို့သည် ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံကို ဆက်လက်သက်ဆိုးရှည်စေမည့် အခိုင်အမာမဲ (Solid Voting) ဖြစ်သည်။ . ဆက်လက်ရေတွက်ပါမည်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၇၅ ဦးအနက်
. NLD သမတ ၏ နောက်မှာ ကာချုပ်က သေနတ်နှင့်ထောက်ထားမည်။ သမတ၏ အာဏာကို ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံနှင့် ကန့် သတ်ထားခံရပြီးလည်းဖြစ်သည်။ ထို့ အပြင် ယခုတဖန် လွှတ်တော်ရော NLD အစိုးရကိုပါ ပြည်ထောင်စု သဘောတူစာချုပ်က ထပ်မံ၍ထိန်းချုပ်ထားခံလိုက်ရသည့် အခြေအနေသို့ ရောက်သွားပါမည်။ . သို့ဖြစ်ပါက NLD ဦးဆောင်သည့် လွှတ်တော်နှင့် အစိုးရသည် လူထုအတွင်း သာမန် အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စများ လည်ပတ်စေရန် ဥပဒေပြဌာန်းခြင်း၊ အုပ်ချုပ်ခြင်း တို့ လုပ်ရုံသာရှိသည်။ တကယ်တန်းအားဖြင့် ဒီမိုကရက်တစ် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံပေါ်ပေါက်စေရန် အုတ်မြစ်ချနိုင်မည့် ဥပဒေသစ်များ ပြဌာန်းခြင်း၊ တည်ဆဲ မတရား ဖိနှိပ်သည့် ဥပဒေဟောင်းများအား ဖျက်သိမ်းခြင်းတို့ ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ဘွယ်မရှိတော့ပါ။ . တခြမ်းပဲ့